October 2018 – Yatanar Mall
+(959) 7768 666 2, +(959)69 222 1500
Event Record Photos
နဝရတ်လက်စွပ်သည် မြန်မာ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်းတွင် ရွှေခွက်(သို့)ငွေခွက်ထဲတွင် နဝရတ် ကိုးပါး၊ နံသာမျိုး ငါးပါး သွေး၍ (သို့မဟုတ်) ရေမွှေးများထည့်၍ သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့၏ ထိပ်၌ သပြေပန်းခက်ဖြင့် ပက်ဖြန်း၍ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်းကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ နဝရတ်ကိုးပါးမှာ- ပတ္တမြား (Ruby) မြ (Emerald) စိန် (Diamond) ကြောင် (Cat’s eye stone) နီလာ (Sapphire) ဂေါ်မိတ် (Zircon or Garnet) ဥဿဖယား (Topaz) သန္တာ (Coral Stone) ပုလဲ (Pearl) ဖြစ်သည်။ ယင်း ရတနာကိုးပါးစလုံးသည် ကျောက်မျက်မျိုးတွင်ပါဝင်သောရတနာများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့အနက် စိန်၊ ပတ္တမြား၊ မြ နှင့် နီလာတို့သည် အဖိုးအတန်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ပုလဲနှင့်သန္တာသည် တွင်းထွက်ကျောက်မျက်များမဟုတ်ဘဲ ပုလဲကို ကမာ (သို့မဟုတ်) မုတ်ကောင်၏ ကိုယ်တွင်းမှရ၍ သန္တာကို သန္တာကောင်များရှိသော သန္တာကျောက်တန်းများမှ…
ဘယ်လို စေ့စပ်လက်စွပ်မျိုးကို ရွေးချယ်၀ယ်ယူသင့်လဲ ?
ကဲ သင့်ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုပါစို့။ အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို သင်ချလိုက်နိုင်ပါပြီ။ ရှေ့ဆက်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့အထိ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ထိုအရာတွေထဲကမှ သင်နဲ့သင့်ချစ်သူကောင်မလေးတို့နှစ်ယောက်အတွက် စေ့စပ်လက်စွပ်ကို ဘယ်လိုပုံစံ၊ ဘယ်လိုအမျိုးအစား၊ ဘယ်လိုဈေးနှုန်း တွေထဲက ၀ယ်ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါသလဲ။ စေ့စပ်လက်စွပ်ရွေးချယ်၀ယ်ယူတဲ့နေရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အချက် (၃) ချက်ကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ – (၁) ဘယ်လောက်တန်တဲ့ စေ့စပ်လက်စွပ်ကိုရွေးချယ်၀ယ်ယူမလဲ ? (၂) ရွေးချယ်၀ယ်ယူစရာ အမျိူးအစားဘယ်နှခုရှိမလဲ ? (၃) အဆိုပါအမျိုးအစားတွေထဲကမှ ဘယ်လိုလက်စွပ်မျိုးကိုရွေးချယ်၀ယ်ယူမလဲ ? (၁) ကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလို စေ့စပ်လက်စွပ်ရဲ့ရာဇ၀င်ဟာ ရင်ခုန်စရာမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ ရှေးယခင်က ရောမလူမျိုးတွေဟာ စေ့စပ်လက်စွပ်ကို ပိုင်ဆိုင်မှုပြသငေ်္ကတ တစ်ခုအဖြစ်သာအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀ ရာစုကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ DeBeers ဆိုတဲ့စိန်ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအဖွဲ့ဟာ “ သင့်ရဲ့၀င်ငွေ ၂ လစာကို စေ့စပ်လက်စွပ်၀ယ်ယူတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုသင့်တယ် “…
စိန်များသည် ဈေးကြီးလွန်းပြီး၊ DIAMOND ALTERNATIVES များ သုံးလာနိုင်ကြသည်။ ယင်းတို့မှာစိန်တု၊ ဓာတုစိန် နှင့် ပြုပြင်ဖန်တီးထားကြသောစိန်များဖြစ်ကြသည်။ အောက်ပါ ဖော်ပြချက်များသည် ယင်းတို့အချင်းချင်းကွဲပြားခြားနားချက်များ ဖြစ်ကြသည်။ ဓာတုစိန် Synthetic diamonds ဓာတုစိန်များတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိ၊ မျက်စိအမြင်နှင့် ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံတို့သည် သဘာ၀စိန်များနှင့် တူညီမှု ရှိကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဓာတုစိန်များသည် သဘာ၀စိန်များနှင့် မဖြစ်မနေတူနေကြသည်။ မတူသည်မှာကားဓာတုစိန်ကဓာတ်ခွဲခန်းမှ ထွက်၍ သဘာ၀စိန်က မြေကြီးထဲမှထွက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဓာတုစိန်များကိုနည်းစဉ် နှစ်မျိုးအနက်မှ တစ်မျိုးကိုအသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းနည်းစဉ်နှစမိျုးမှာ ဖိအားမြှင့်/အပူချိန်မြှင့် နည်းစဉ် သို့မဟုတ် ဓာတုငွေ့ဖို့ခြင်းနည်းစဉ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ စိန်တု Simulants စိန်နှင့်တူသောအခြားကျောက်မျက်များရှိသော်လည်းအရည်အသွေးကွာခြားကြသည်။ ယင်းတို့သည် သဘာ၀ကျောက်မျက်များသို့မဟုတ် ဓာတုကျောက်မျက်များ ဖြစ်ကြသည်။ သဘာ၀ကျောက်မျက်များသည် စိန်နှင့် ဆင်တူ၍ အသုံးပြုများကြသည်။ ဥပမာအရောင်မဲ့…
ကျောက်မျက်ချစ်သူများအတွက် ကျောက်စိမ်းအကြောင်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့် ကျောက်စိမ်းတွင်းထွက်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ရှင့်။ ဂျေဒိုက် (Jadeite) နှင့် နက်ဖရိုက် (Nephrite) ဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျေဒိုက်သည် ပို၍ရှားပြီး ဈေးပိုကြီးပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံး ဂျေဒိုက်များက မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ရှိပါတယ်ရှင့်။ အရောင် Colour ဂျေဒိုက်ကျောက်စိမ်းသည် ခရမ်းပြာနုရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်နှင့် အခြားအရောင်များလည်းရှိပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးအရောင်မှာ အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မြစိမ်းရောင်ကျောက်စိမ်းက အလင်းပေါက်ဖြစ်ပြီး အင်ပီးရီးယယ် ကျောက်စိမ်းဟုခေါ်ပါတယ်ရှင့်။ ခရမ်းပြာနုရောင်ကျောက်စိမ်းက အင်ပီးရီးယယ်နောက် တန်ဖိုးဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အခြား အစိမ်းရောင်ကျောက်စိမ်းများဖြစ်သော ကင်းဖစ်ရှာကျောက်စိမ်းက အစိမ်းဖျော့ရောင်ဖြစ်ပြီး အင်ပီးရီးယယ် ကျောက်စိမ်းထက် အလင်းပေါက်ပါတယ်ရှင့်။ အက်ပယ် ကျောက်စိမ်းသည် စိမ်းဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ မော့စ်အင်စနိုး ကျောက်စိမ်း သည် အရည်လည်သော ကျောက်စိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စိမ်းပြာရောင်နှင့် အဖြူရောင်တို့ ရောစပ်ထားပါတယ်ရှင့်။ အစက်အပြောက်လေးများနှင့် အကွက်တို့ ပါပါတယ်။ အရောင်သိပ်သည်းလေ တန်ဖိုးရှိလေဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။…
ပုလဲသည် ပင်လယ်အတွင်း နေထိုင်သော ကမာ(သို့)မုတ်ကောင်၏ ကိုယ်တွင်းမှ ရရှိသော အရာဖြစ်သည်။ တွင်းထွက် ကျောက်မျက် မဟုတ်ပေ။ ပုလဲကို မြန်မာလူမျိုးတို့က န၀ရတ်ကိုးပါး တွင် ပါ၀င်သော ရတနာတစ်ပါး အဖြစ် အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထား ၀တ်ဆင်ကြ ပါသည်။ န၀ရတ် ကိုးပါးစလုံးတွင် တစ်ခုခြင်း၌ ထူးခြားသည့် တန်ခိုး အာနိသင် ရှိကြ သည့်အနက် ပုလဲ၏ အာနိသင်မှာ ကျက်သရေ မင်္ဂလာ ရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ပုလဲ၏ အားသာချက်မှာ ကျောက်မျက်များ ကဲ့သို့ ခွဲဖြတ်ခြင်း၊ သွေးယူခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရန် မလိုပဲ ပုလဲ ဖော်ယူ ပြီးလျှင် ပြီးခြင်းပင် လှပနှစ်လို ဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ရခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပုလဲတွင် သဘာဝပုလဲနှင့် မွေးပုလဲဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။…
© Copyright 2018 Mandalay Yatanar Mall. All right reserved.